ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈပွီးမှ လီဗာပူးလျတို့ ကဆြုံးသှားခဲ့တာလား? – Sports A2Z
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ လကျရှိပရီးမီးလိဂျဘောလုံးရာသီမှာ ရလဒျတှေ ထိုးစိုကျဆငျးသှားတယျ။ ဒဏျရာအနာတရတှေ မြားပွားပွီး အသငျးရဲ့ ယန်တရားကိုလညျပတျနတေဲ့ အဓိက ကစားသမားတှေ အတုနျးအရုံး အနားယူနရေတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈပွီးမှ လီဗာပူးလျကဆြုံးသှားပွီလား? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ လှောငျပွောငျခံလာရတယျ။ ‘ကောကျရိုးမီးအသငျး’ လို့ စှပျစှဲမှုတှေ ရှိလာတယျ။ ဒီလိုပွောဆိုမှုတှကေ အမှနျတကယျလား? အဖွဈမှနျနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိသလား လှဲခြျောနသေလား? ဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျပါ။
တကယျတမျးမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈပွီးမှ လီဗာပူးလျကဆြုံးသှားပွီလို့ဆိုတာဟာ အတျောလေးညံ့ဖငျြးတဲ့ ယူဆခကျြဖွဈပါတယျ။ မှတျဥာဏျတှကေို ပွနျချေါကွညျ့တတျရငျ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ ဟိုဆေး မျောရငျညိုရဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဘဝကနေ အဆငျ့ ၁၀ နဲ့ အဆုံးသတျခဲ့တယျ။ ခနျြပီယံဆုယူခဲ့တဲ့ မျောရငျညိုဟာ ခရစ်စမတျမတိုငျခငျမှာတငျ အထုတျခံရတယျ။ အဲဒီရာသီမှာ နိုငျပှဲက ၃၂ ရာခိုငျနှုနျးသာရှိတယျ။
နောကျတသငျးက လကျစတာကို မှတျမိကွမလား… ၂၀၁၅-၁၆ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ခနျြပီယံ၊ ရာနီယာရီရဲ့ လကျစတာအသငျးဟာ ၂၀၁၆-၁၇ မှာတော့ အဆငျ့ ၁၂ နဲ့ စြာနျလြှောခဲ့တယျ။ နိုငျပှဲအခြိုးက ၃၂ ရာနှုနျးနဲ့အဆုံးသတျတယျ။ အကြိုးဆကျကတော့ ဒေါကျတိုငျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ အနျဂိုလို ကှနျတနေဲ့ ဒရငျးဝါးတားတို့ကို ထုတျရောငျးခဲ့ရတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးကတော့ လကျရှိမှာ အဆငျ့ ၈ ​နရော ရပျတညျနတေယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈရာသီပေါငျးရမှတျက ၁၉၇ မှတျအထိယူထားတယျ။ အံ့အားသငျ့ဖှယျရာ စံခြိနျဖွဈတယျ။ ကိုယျတငျထားတဲ့ ခွရောကို ကိုယျတိုငျမီအောငျ ပွနျနငျးဖို့ ခကျခဲလောကျအောငျအထိ ကောငျးလှနျးတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပွခဲ့တယျ။ လကျရှိရာသီမှာ နိုငျပှဲအခြိုး ၄၃ ရာခိုငျနှုနျးရရှိထားတယျ။
၂၀၁၈ မှာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲတကျတယျ။ ဒုတိယဆုနဲ့ နှဈသိမျ့ခဲ့ရတယျ။ နောကျ ၁၂ လအကွာမှာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျဝငျခံခဲ့တဲ့အသငျးဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈလာတယျ။ ဒီလို ရရှေညျခွစှေမျးစှဲမွဲပွီး ကိုယျ့အဆငျ့အတနျးကိုယျ ထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့ အသငျးဖွဈတယျ။
ဒီရာသီမှာ ယာဂနျ ကလော့ပျရဲ့ ဗဟိုခံစဈအတှဲက မတူညီတဲ့ လူအတှဲ ၁၈ တှဲအထိ ထုတျသုံးရတဲ့အထိ ဒဏျရာဗရပှနဲ့ ရုနျးကနျနရေခြိနျဖွဈတယျ။ ပေါကျကှဲအားကောငျးတဲ့ ကှငျးလယျလူတှကေို ခံစဈကို ဆငျးကစားခိုငျး​နရေခြိနျဖွဈတယျ။ လီဗာပူးလျအမာခံ တိုကျစဈ Trio မိုဆာလား၊ မာနေး၊ ဖာမီနိုတို့က အရငျလို မီးကုနျယမျးကုနျ ဂိုးမသှငျးနိုငျတော့ဘူး။ ဂိုးသှငျးခွကေလြာတယျ။
အနျဖီးလျမွမှော ၂ နှဈနီးပါးအထိ ရှုံးပှဲမရှိ ဖွတျသနျးလာတဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အိမျကှငျး ၆ ပှဲဆကျရှုံးတဲ့အထိ ရုနျးကနျနရေတယျ။ ဒီလိုရှုံးပှဲတှထေဲမှာ ဘနျလေ၊ ဘရိုကျတနျ၊ ဖူလျဟမျတို့လို အသငျးတှကေို ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလျအဆငျ့အတနျးနဲ့ ခြိနျထိုးကွညျ့ရငျ ကလော့ပျအတှကျ ဘယျလိုလကျမခံနိုငျစရာ အနအေထားမြိုးဖွဈတယျ။
လီဗာပူးလျပရိသတျတှအေတှကျ ဘယျလို စံပတေံနဲ့ပဲ တိုငျးကွညျ့ကွညျ့ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈရုံကလှဲ တုံ့ပွနျနိုငျစရာအားတောငျ မရှိတော့တဲ့ အခွအေနမြေိုးဖွဈတယျ။ ဒါက လီဗာပူးလျရဲ့ ‘အကခြိနျ’ လားလို့ ဟုတျပါတယျလို့ ပရိသတျတှကေ ဖွပေါလိမျ့မယျ။ ရငျနာနာနဲ့ လကျသငျ့ခံပွီး ဖွပေါလိမျ့မယျ။
ဒီလို အကခြိနျမြိုးမှာတောငျ ခနျြပီယံလိဂျမှာ RB လိုကျပျဇဈအသငျးကို နှဈကြော့စလုံး ၂ ဂိုးပွတျစီနဲ့ တီးသှားတဲ့ လီဗာပူးလျကို ကဆြုံးသှားပွီလားလို့ မေးခှနျးထုတျတာကတော့ ရယျစရာပါ။ ဒီခွစှေမျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ခနျြပီယံဖွဈနိုငျသေးသလို အစှမျးကုနျ ညှဈထုတျထားတဲ့ ကွံလိုအဖွဈမြိုး ကွုံခဲ့ရပမေယျ့ လူသားတှဖွေဈတဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးသားတှအေနနေဲ့ အငျအားပွနျလညျဖွညျ့တငျးပွီး ဝဖေနျမှုတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျဦးမှာပါလို့ မေးခှနျးတှကေို ခဖြေကျြရဦးမယျ ထငျပါတယျ။
ZAWGYI: ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ လက်ရှိပရီးမီးလိဂ်ဘောလုံးရာသီမှာ ရလဒ်တွေ ထိုးစိုက်ဆင်းသွားတယ်။ ဒဏ်ရာအနာတရတွေ များပြားပြီး အသင်းရဲ့ ယန္တရားကိုလည်ပတ်နေတဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ အတုန်းအရုံး အနားယူနေရတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးမှ လီဗာပူးလ်ကျဆုံးသွားပြီလား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ လှောင်ပြောင်ခံလာရတယ်။ ‘ကောက်ရိုးမီးအသင်း’ လို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိလာတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေက အမှန်တကယ်လား? အဖြစ်မှန်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိသလား လွဲချော်နေသလား? ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးမှ လီဗာပူးလ်ကျဆုံးသွားပြီလို့ဆိုတာဟာ အတော်လေးညံ့ဖျင်းတဲ့ ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ဥာဏ်တွေကို ပြန်ခေါ်ကြည့်တတ်ရင် ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ ဟိုဆေး မော်ရင်ညိုရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဘဝကနေ အဆင့် ၁၀ နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ ချန်ပီယံဆုယူခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညိုဟာ ခရစ္စမတ်မတိုင်ခင်မှာတင် အထုတ်ခံရတယ်။ အဲဒီရာသီမှာ နိုင်ပွဲက ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်။
နောက်တသင်းက လက်စတာကို မှတ်မိကြမလား… ၂၀၁၅-၁၆ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ချန်ပီယံ၊ ရာနီယာရီရဲ့ လက်စတာအသင်းဟာ ၂၀၁၆-၁၇ မှာတော့ အဆင့် ၁၂ နဲ့ ဈာန်လျှောခဲ့တယ်။ နိုင်ပွဲအချိုးက ၃၂ ရာနှုန်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ဒေါက်တိုင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ အန်ဂိုလို ကွန်တေနဲ့ ဒရင်းဝါးတားတို့ကို ထုတ်ရောင်းခဲ့ရတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ လက်ရှိမှာ အဆင့် ၈ ​နေရာ ရပ်တည်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရာသီပေါင်းရမှတ်က ၁၉၇ မှတ်အထိယူထားတယ်။ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ စံချိန်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ခြေရာကို ကိုယ်တိုင်မီအောင် ပြန်နင်းဖို့ ခက်ခဲလောက်အောင်အထိ ကောင်းလွန်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြခဲ့တယ်။ လက်ရှိရာသီမှာ နိုင်ပွဲအချိုး ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းရရှိထားတယ်။
၂၀၁၈ မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတက်တယ်။ ဒုတိယဆုနဲ့ နှစ်သိမ့်ခဲ့ရတယ်။ နောက် ၁၂ လအကြာမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်ဝင်ခံခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်။ ဒီလို ရေရှည်ခြေစွမ်းစွဲမြဲပြီး ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုယ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အသင်းဖြစ်တယ်။
ဒီရာသီမှာ ယာဂန် ကလော့ပ်ရဲ့ ဗဟိုခံစစ်အတွဲက မတူညီတဲ့ လူအတွဲ ၁၈ တွဲအထိ ထုတ်သုံးရတဲ့အထိ ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့ ရုန်းကန်နေရချိန်ဖြစ်တယ်။ ပေါက်ကွဲအားကောင်းတဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေကို ခံစစ်ကို ဆင်းကစားခိုင်း​နေရချိန်ဖြစ်တယ်။ လီဗာပူးလ်အမာခံ တိုက်စစ် Trio မိုဆာလား၊ မာနေး၊ ဖာမီနိုတို့က အရင်လို မီးကုန်ယမ်းကုန် ဂိုးမသွင်းနိုင်တော့ဘူး။ ဂိုးသွင်းခြေကျလာတယ်။
အန်ဖီးလ်မြေမှာ ၂ နှစ်နီးပါးအထိ ရှုံးပွဲမရှိ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အိမ်ကွင်း ၆ ပွဲဆက်ရှုံးတဲ့အထိ ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒီလိုရှုံးပွဲတွေထဲမှာ ဘန်လေ၊ ဘရိုက်တန်၊ ဖူလ်ဟမ်တို့လို အသင်းတွေကို ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်အဆင့်အတန်းနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် ကလော့ပ်အတွက် ဘယ်လိုလက်မခံနိုင်စရာ အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။
လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်လို စံပေတံနဲ့ပဲ တိုင်းကြည့်ကြည့် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ရုံကလွဲ တုံ့ပြန်နိုင်စရာအားတောင် မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါက လီဗာပူးလ်ရဲ့ ‘အကျချိန်’ လားလို့ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ရင်နာနာနဲ့ လက်သင့်ခံပြီး ဖြေပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို အကျချိန်မျိုးမှာတောင် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ RB လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းကို နှစ်ကျော့စလုံး ၂ ဂိုးပြတ်စီနဲ့ တီးသွားတဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ကျဆုံးသွားပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်တာကတော့ ရယ်စရာပါ။ ဒီခြေစွမ်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်သေးသလို အစွမ်းကုန် ညှစ်ထုတ်ထားတဲ့ ကြံလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ရပေမယ့် လူသားတွေဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းသားတွေအနေနဲ့ အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီး ဝေဖန်မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဦးမှာပါလို့ မေးခွန်းတွေကို ချေဖျက်ရဦးမယ် ထင်ပါတယ်။